नेपाल नवनिर्माण महाअभियान - क. वामदेव गाैतम
नवनिर्माण महाअभियान सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण नेपाली जनताले नयाँ युग निर्माण भएको महसुस गर्नेछन् । त्यो इतिहासको अभूतपूर्व गौरवबोधको अवस्था हुनेछ । नेपाली समाज सम्पूर्ण पछौटे संस्कार परित्याग गरी सभ्य, सुसंस्कृत र आर्थिक रूपले समृद्ध हुनेछ ।
बामदेव गौतमद्वारा लिखित पुस्तक
नवनिर्माण महाअभियानमा ५ सय अर्बभन्दा धेरै अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ । सोअन्तर्गत २ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको अक्षयकोषको रूपमा नेपाल नवनिर्माण कोष स्थापित हुनेछ । यसबाट महाअभियानको १०औँ वर्षमा नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा धेरै पुग्नेछ । २ सय अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीबाट १२ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिनेछ र बाँकी ३ सय अर्ब अमेरिकी डलरको विभिन्न क्षेत्रमा गरिने लगानी र खर्चले अर्थतन्त्रमा अत्यधिक उचाइको उभार ल्याउनेछ । यसबाट समग्रमा आर्थिक वृद्धिदर प्रतिवर्ष औसतमा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ । यस्तो उच्च प्रतिव्यक्ति आम्दानी प्राप्त हुँदा नवनिर्माणको १०औँ वर्षमा अर्थतन्त्रले असाधारण फड्को मारेको नयाँ अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
आर्थिक समृद्धिले थप गति लिई महाअभियानको १७ औँ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर अर्थात् १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्नेछ । आर्थिक विकासको यो क्रम त्यहीँ रोकिनेछैन । यसको तीव्रता अरू बढेर जानेछ । यस्तो अवस्थामा भन्न सकिन्छ, महाअभियानको ३० औँ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा धेरै पुग्नेछ । त्यस अवस्थामा नेपाल समृद्ध राष्ट्रको रूपमा चिनिनेछ र संसारका विकसित देशहरूको समकक्ष पुग्नेछ ।
सामाजिक–आर्थिक समृद्धिसहित विकसित देशको समकक्ष पुग्न उत्पादनमा व्यापक वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्रको उच्चस्तरमा विकास तथा अनेकौँ क्षेत्रमा गरिनुपर्ने उच्च विकासका लक्ष्यलाई महाअभियानले ठोस रूपमा अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रअन्तर्गत ७ लाख हेक्टर भूमिमा ठूला कृषि फार्महरू, लाखौँ हेक्टर भूमिमा साना कृषि फार्महरू, १० लाख हेक्टर भूमिमा कृषि वन विकास हुनेछन् । सम्पूर्ण कृषिभूमिमा व्यावसायिक उत्पादन र औद्योगिकीकरण हुनेछ । सम्पूर्ण खाद्यान्न प्राकृतिक र प्रांगारिक भई नेपाल रासायनिक मल र रासायनिक विषादी मुक्त देश बन्नेछ । कृषिको औद्योगिकीकरणले नेपाली उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण लागू हुनेछ ।
औद्योगिकीकरणका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार, लगानी र बजारका लागि सम्पूर्ण व्यवस्था महाअभियानका दौरान तयार गरिनेछ । औद्योगिक करिडोर, सबै प्रदेशमा निर्माण गरिने विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू तथा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र पहिले जिल्लास्तरमा खोलिएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको आधुनिकीकरणले सिङ्गो राष्ट्र औद्योगिकीकरण हुनेछ । यसरी उत्पादनका सबै क्षेत्रमा हुने औद्योगिक विकासबाट नेपाल संसारमा औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा चिनिनेछ । मुलुकको आधाभन्दा धेरै भूभागमा घना जङ्गल विकसित हुनेछ र औद्योगिक उत्पादनका रूपमा ठूलो मात्रामा बजारमा जानेछ । कृषि वनका रूपमा विकास गरिने वनजङ्गलले सबै गाउँ, बस्ती तथा नगरहरू पर्यावरणमैत्री क्षेत्रका रूपमा विकसित हुनेछन् । नेपाल संसारकै सुन्दर औद्योगिक देश बन्नेछ ।
महाअभियानअन्तर्गत निर्माण हुने सम्पूर्ण संरचना भूकम्प प्रतिरोधक, अग्नि प्रतिरोधक, मानवीय दृष्टिकोणले अत्यन्त सुविधा सम्पन्न हुनेछन् । राजधानी सुधार कार्यक्रमबाट नेपालको नयाँ राजधानी सुन्दर, स्वच्छ, हरियालीले युक्त, सुविधा सम्पन्न तथा संसारभरिका पर्यटकहरूको आगमन केन्द्रका रूपमा विकसित हुनेछ । महाअभियानले आजअगाडिका सबै नगरलाई आधुनिकीकरण गर्नेछ । नयाँ नगरहरू अत्याधुनिक निर्माण गरिएका हुनेछन् । उत्पादनको अवस्थामा बाहेक सम्पूर्ण नेपाली जनता आधुनिक सुविधासम्पन्न नगरमा बसोवास गर्नेछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, आवास, सन्तुलित भोजन, मनोरञ्जन र खेलकुद जनताले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिला र बालबालिकाहरूले राज्यद्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त गर्नेछन् । काम गर्ने उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।
मुनाफामूलक राष्ट्रिय कारोबारमा सबै नेपाली नागरिकले लगानी गर्नेछन् । यसका साथै आर्थिक रूपले कसैलाई अत्यधिक समृद्धि र कसैलाई अत्यधिक पछाडिको अवस्था आउन नदिने गरी सामाजिक समानता कायम गरिनेछ । श्रमप्रति आदर, उद्यमशीलताको संस्कृति, श्रमिक बनेर काम गर्दा गौरव महसुस गर्ने नेपाली नागरिकहरू विकसित हुनेछन् ।
महाअभियानले सामाजिक समतामूलक विकासको आधारमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति अंगीकार गरेकाले ३ वर्षभित्रमा गरिबीको अन्त्य हुनेछ । नवनिर्माण अभियानको १० वर्षमा लाखौँ व्यक्तिले सीप र क्षमता वृद्धिसहित रोजगारी र स्वरोजगारी पाउनेछन् । उच्च आर्थिक वृद्धिको क्रममा ठूलो जनशक्ति थप खपत हुने र आमरूपमा हुने अनुकूल स्थितिले गर्दा बेरोजगारीको पूर्ण अन्त्य हुनेछ । यसरी अदक्ष श्रमशक्तिका रूपमा नेपाली श्रमशक्ति विदेशमा बेचिने प्रथा सदाका लागि समाप्त हुनेछ । त्यसैगरी विदेशी फौजमा भर्ती हुने अवस्था पनि सदाका लागि समाप्त हुनेछ ।
प्रत्येक परिवारलाई सुविधासम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधक आवास उपलब्ध हुनेछ । शिशु मृत्युदर ०.५ प्रतिशतमा पुगेको हुनेछ । सरदर आयुले ८० वर्ष नाघ्नेछ । साक्षरता ९५ प्रतिशत पुग्नेछ । शैक्षिकस्तर ९० प्रतिशत पुग्नेछ । सहरीकरण ९५ प्रतिशत पुग्नेछ । प्रत्येक नेपाली नागरिकका लागि सन्तुलित आहारको सुनिश्चितता हुनेछ । जातिभेद, छुवाछुत र उचनीच सदाका लागि समाप्त भएको सामाजिक रूपमा एउटै नेपाली जाति विकसित हुनेछ । संसारमा नेपाल सामाजिक सुरक्षाको अग्रणी देशको रूपमा चिनिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठुल्ठूला उपलब्धि हासिल हुनेछन् । महाअभियानको यस अवधिमा ५८ हजार ८ सय ६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसै अवधिमा पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण २३०० किमि ७६५ केभी प्रसारण लाइन जडान हुनेछ । त्यसैगरी सबै क्षमताका राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन अनुमानित २ लाख किमि विस्तार हुनेछ । सिंगो देश विद्युतीकरणको जालोले आबद्ध हुनेछ । उत्पादन हुने विद्युत्को आधा हिस्साबाट देशको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता पूरा हुनेछ र बाँकी आधा हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुनेछ । विद्युत् ऊर्जाको बजारीकरणले मात्र पनि नेपालको व्यापारमा रहेको असन्तुलन समाप्त भई ठूलो मात्रामा नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार देखा पर्नेछ ।
कृषि उत्पादनदेखि औद्योगिक उत्पादन, पर्यटनका अनेक क्षेत्रसहित सडक यातायातका साधन र रेल यातायातका साधन सबै विद्युत् ऊर्जाबाट सञ्चालित हुनेछन् । चुलोचौका, पशुपक्षी, माछा तथा डेरी र पोल्ट्री फर्महरू सबै विद्युत् ऊर्जाबाट सञ्चालित हुनेछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा यन्त्रमानवसमेत परिचालित हुने अवस्था विकसित हुनेछ । यसरी नेपाली जीवन विद्युत्मय भई विद्युतीय गतिमा अगाडि बढ्नेछ । सडक यातायातअन्तर्गत यस अवधिमा सबै गरी १७ हजार किमि अत्याधुनिक राजमार्ग र सहायक राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति हुनेछन् । सबै पुराना राजमार्ग, जिल्ला सडक, नगर सडक तथा ग्रामीण सडकहरू करिब ९८ हजार किमि मर्मत गरी अत्याधुनिक हुनेछन् ।
त्यस्तै विभिन्न ठाउँ हुँदै अगाडि बढ्ने ग्रेट हिमालयन टे«किङ रुट करिब ५ हजार किमि, अन्य साना टे«किङ रुट करिब १ हजार किमि निर्माण हुनेछन् । ग्रेट हिमालयन टे«किङ रुटका विभिन्न स्थानसहित देशैभरि अनेक ठाउँमा केवलकार निर्माण हुनेछन् । सडक यातायातले सम्पूर्ण नेपाली बस्ती, उत्पादनका क्षेत्र, पर्यटनका क्षेत्र र सबै किसिमका बजारलाई एकताबद्ध गर्नेछ । यी सबै कम्तीमा आगामी एक सय वर्षसम्मका लागि नेपाली जनतालाई गतिशील बनाइरहने संरचनाका रूपमा रहनेछन् ।
अब मानिसको गतिशीलता आकाशमा हवाईजहाजमार्फत र जमिनमा अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त तीव्र गतिका चुम्बकीय रेलमार्फत मापन गर्न थालिएको छ । नेपालले पनि त्यही गतिमा आफूलाई अगाडि बढाउनेछ । महाअभियान सम्पन्न भएपछि पूर्व–पश्चिम ३ वटा र उत्तर–दक्षिण ५ वटा तीव्र गतिका चुम्बकीय रेलमार्ग तथा चक्रपथमा सञ्चालन हुने मेट्रो रेलसमेत ६ हजार ४ सय २७ किमी रेलमार्ग निर्माण हुनेछ । देशभित्र सञ्चालित रेलमार्गबाट दसौँ लाख व्यक्ति आवतजावत गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि नेपालको कुनै पनि सहर, गाउँ, बजार र बस्ती कसैको निम्ति टाढा हुनेछैन र अभूतपूर्व तीव्र आर्थिक क्रियाकलापले जनताको जीवनस्तर उच्चस्तरमा विकसित हुनेछ ।
हवाई यातायाततर्फ निजगढमा हब केन्द्रका रूपमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनेछ । काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण, सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नत भएको हुनेछ । विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत, धनगढी र दोलखाको सैलुङ, उपल्लो मुस्ताङ तथा अछामको रामारोसनमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विमानस्थल निर्माण हुनेछन् । राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको विकास र विस्तारको क्रममा आन्तरिक ठूला ९ वटा र आन्तरिक साना २७ वटा तथा निजगढ र त्रिभुवन विमानस्थलसहित १० अन्तर्राष्ट्रिय गरी ४६ वटा अत्याधुनिक विमानस्थल निर्माण गरिएका हुनेछन् । यी विमानस्थलबाट आन्तरिक र बाह्य गरी दैनिक करिब २ लाख पर्यटक आवतजावत गर्न सक्नेछन् । यो अवस्थाले एकातिर आर्थिक क्रियाकलापमा अत्यधिक गतिशीलता उत्पन्न हुनेछ र अन्तर्निर्भरतामा विकसित सामाजिक सम्बन्धले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरिरहनेछ ।
जलमार्गअन्तर्गत कोसी–गंगा–बंगालको खाडीसम्म र त्यसैगरी भारत, चीन र बंगलादेशसित भाडामा लिइएका बन्दरगाहबाट संसारभरि पहुँच हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको विकास गरिएको हुनेछ । राष्ट्रियस्तरमा कोसी, नारायणी कर्णाली नदीहरूमा जलमार्गको विकास हुनेछ । नेपालसित नवनिर्माण महाअभियानपछि कपिलवस्तु, रुपन्देही, परासी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाको सम्पूर्ण भूभागमा विकसित गरिएको बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय विशेष आर्थिक क्षेत्र हुनेछ । यस आर्थिक क्षेत्रलाई नेपालका निम्ति मात्र होइन, संसारकै निम्ति नमुनाको रूपमा विकसित गरिएको हुनेछ । यसमा संसारका मुख्य राजनीतिक केन्द्रका रूपमा विकसित राजधानीहरूको नमुनामा ११ सहर विकसित हुनेछन् । यो बृहत् क्षेत्र आर्थिक कारोबारको हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि विशेष हुनेछ । समृद्ध भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि नेपाल संसारकै अग्रणी देश भनेर चिनिनेछ ।
नवनिर्माण महाअभियानले प्रस्तावित गरेको राजनीति र शासन प्रणाली स्थापित भयो भने स्थानीय तह सबभन्दा अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । संविधानको सर्वोच्चता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी चरित्र भएको संसद्सहित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली कायम हुनेछ । बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र उच्चस्तरको संस्कृतिले विकसित समाज भएको हुनेछ । महाअभियानको अवधिमै भूमिगत अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ तथा भ्रष्टाचार पूर्ण रूपले निवारण हुनेछ । नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबार नगदविहीन अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएका हुनेछ । शिक्षा पूर्ण रूपले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आधारित हुनेछ, जसले गर्दा शैक्षिक बेरोजगारी पूर्ण रूपले समाप्त भएको अवस्था हुनेछ । हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मस्थलहरू आस्था र विश्वासका साथै पर्यटन विकासको अभूतपूर्व सम्भावना बनेर देखा पर्नेछन् । राष्ट्रको आधा भूभाग प्राकृतिक चिडियाखानाले सजाइएको वनजङ्गलयुक्त हुनेछ । नेपालका नदीनाला र तालतलैया जनताका निम्ति अब प्रलय होइन, समृद्धिका साधन बनेर प्रकट हुनेछन् । त्यसवेला साँच्चै नेपाली जनताले प्रकृतिमाथि प्रारम्भिक विजय हासिल गरेका हुनेछन् । नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सिमानाको अवस्था समाप्त हुनेछ ।
खुला सिमानालाई प्रयोग गरेर हुने तस्करी, अनेक किसिमका अवाञ्छित क्रियाकलाप र अवैधानिक आवतजावत समाप्त भई दुई देशबीच सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनेछ । नेपालसित गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौता समाप्त भई सम्मानपूर्ण वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित भएको स्वतन्त्र र सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसहितको सबल नेपाल राष्ट्र हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः समाजवादी भूमण्डलीकरण बारे – क. फिडेल क्यास्ट्राे
यो पनि पढ्नुहोेस्ः एनजिओ: साम्राज्यवादको सेवक – जेम्स पेट्रास र हेनरी वेल्तमेयर
यो पनि पढ्नुहोस्ः साेमालियाकाे भाेकमरी र यसकाे वास्तविकता – मिसेल चाेसडुवस्की
पछिल्लाे - मोतिबिन्दुको सर्जरी गरेर आऊ
अघिल्लाे - नेपालको इतिहासः एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण